WARARKA BARAAWEPOST Talaado 12 July 2011
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed oo dalka dib ugu soo laabtay
Taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed Sareeye guuto Shariif Sheekhuna Maye ayaa dalka dib ugu soo laabtay kadib markii uu socdaalo howleed ku tagay qaar kamid ah dalalka geeska Afrika.
Dalalkii uu taliyaha ciidanka booliska General Shariif Sheekhuna socdaalka shaqo ku tagay ayaa waxay kala ahaayeen dalalka Kenya,Uganda iyo Burundi.
Taliyaha ayaa markii uu ka soo degay garoonka caalamiga ah ee diyaaradaha ee magalaada Muqdisho”Adan Cadde international Airport” ayaa waxaa halkaas si diiran ugu soo dhoweeyay taliye ku xigeenada ciidanka booliska soomaaliyeed ee kala ah Gen Saacid iyo Gen Gasgas iyo weliba saraakiil ka socotay hogganada kala duwan ee uu ka kooban yahay ciidanka booliska.
Saraakiishaas oo ay ka mid ahaayeen colonell dhega caleen,col Ahmed Aftooje oo ah taliyaha saldhiga booliska qaybta garoonka diyaaradaha, G/le dhexe Maxamed Saciid Cabuud oo ah madaxa hoggaanka maaliyadda ee ciidanka booliska, Colonel Jeylaani Maxamed iyo saraakiil kale.
Taliyaha ayaa intii uusan u kicitimin hoygiisa ayaa wuxuu kulan socday muddo gaaban uu kula yeeshay qolka nasashada ee ku yaal garoonka saraakiisha ciidanka booliska ee soo dhoweysa isagoo halkaas ku siiyay warbixin ku saabsan waxyaabihii uu kala soo kulmay socdaaladii uu ku tagay dalalakaas .